Haweenka, Dhallaanka & Caruurta (WIC)
North Dakota WIC waxay rabtaa inay aragto qoyskaaga oo faraxsan, caafimaad qaba oo horumarsan. Waxaan kaa taageernaa uurka ilaa dhalashada iyo cunuggaaga laga bilaabo dhallaanka ilaa dhalashada canuggaaga 5aad
Ka eeg alaabooyinka ku jira barnaamijka WICShopper si aad u hubiso inay u qalmaan Woqooyiga Dakota WIC. Xusuusnow inaad hubiso inaad runtii haysato cuntooyinka ku qoran jeegaaga kahor intaadan iibsan sheyga!
Oggol - Shaygan waxaa loo oggolaaday WIC! Hal shay oo ay tahay inaad ogaato waa inaad arki kartaa shay la oggol yahay, laakiin maaha qayb ka mid ah dheefahaaga cuntada ee WIC, sidaa daraadeed kuma iibsan kartid WIC. Tusaale ahaan, cunugga hal sano jira wuxuu helaa caano dhan. Haddii aadan qoyskaaga ku lahayn cunug hal sano jir ah, caanaha oo dhan qayb kama noqon doonaan gargaaradaada cuntada ee WIC, mana awoodi doontid inaad caano dhan ka iibsatid diiwaanka. Ilaa dheefaha WIC ay ku xiriiraan barnaamijka WICShopper, farriintan “la oggol yahay” looma adeegsan karo gargaarada qoyskaaga.